Malunga Nathi - Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd.
I-RuiYi ngumthengisi oqeqeshiweyo kunye nomvelisi wepleyiti ye-aluminium alloy e-China kwaye sikwasebenzisana nomzi-mveliso odumileyo we-aluminium ozama ukusindisa umthengi wethu kwiinkalo ezahlukeneyo.Umzi-mveliso wethu wasekwa ngo-1997, ngoku inkampani inabasebenzi bebonke abangaphezu kwama-4000, kuquka nabasebenzi bobuchwephesha abangaphezu kwama-300.
Umenzi, uMmeli, uMthumeli ngaphandle, iNkampani yokuRhweba, umthengisi
UMntla Melika, eMzantsi Melika, eNtshona Yurophu, eMpuma Yurophu, eMpuma Asia, kuMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, iAfrika, iOceania, kwihlabathi liphela
Ukuba sesona sisisombululo sisOne-Stop kwi-Aluminium Metal Supply e-China.
Sizimisele ukubonelela ngeemveliso zeAluminiyam ezikumgangatho wehlabathi.Akukho nto ibaluleke ngaphezu kokwaneliseka kwakho ngokupheleleyo kwinkonzo yethu kunye nemveliso ekumgangatho obalaseleyo, ukukhula okuqhubekayo, amathuba, kunye nobudlelwane obanelisayo.
I-Xiaoxian RuiYi Commercial Trade Co., i-Limited ibigxile kumgangatho ophezulu wezinto ze-aluminium alloy kwiminyaka eyi-10 e-China.Saqala njengomsebenzi omncinci, kodwa ngoku sele ngomnye wababoneleli abakhokelayo kwishishini le-aluminium e-China.
Khetha inzuzo yethu enkulu engundoqo
Ukususela kumyalelo obekiweyo ukuya kuthunyelo oluphuma ngaphandle, ukuhlolwa kwemigangatho emithathu kuyenziwa ukuze kuqinisekiswe ukuba izinga elifanelekileyo leemveliso ezigqityiweyo lingaphezulu kwe-100%.Sine-inventri enkulu, kwaye sinokubonelela abathengi ngobonelelo olwaneleyo ukuze abathengi bangakhathazeki malunga nengxaki yokuphuma kwesitokhwe kunye nokunqongophala kwesitokhwe.
Ukuhanjiswa ngexesha kunye nokonga iindleko
Siyathembisa ukuba emva kokuba umthengi efake iodolo, iimveliso zendawo ziya kuthunyelwa kwangolo suku lunye.Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd. ngokunyanisekileyo ibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi basekhaya nabangaphandle, kwaye ibonelela abathengi ngeemveliso ezanelisayo.
Amava enkonzo abonakalisiweyo
Siyathembisa ukuba inkampani yethu iya kulandela yonke iodolo kwangexesha ukuqinisekisa ukuba abathengi banokufumana iimpahla ngokukhuselekileyo, bamamele izimvo zabo kunye neengcebiso ngokuqhubekayo, kwaye babonakalise ezethu iingxaki.Vumela abathengi bazive bekhululekile.
I-Aluminiyam Alloys igcina umgangatho ophezulu wemveliso kuyo yonke inkqubo yokuvelisa.Ukusuka ekuhanjisweni kwe-ingot kunye nesanti ukuya kwi-check dimensional check, ingqwalasela enkulu inikwa zonke iimveliso njengoko zichazwe yinkqubo yokulawula amaphepha kwimfuno nganye yokuphosa.
Izibonelelo ezisemgangathweni ziquka i-mass spectrometry yohlalutyo lwentsimbi, i-SPC yolawulo lwesanti, uvavanyo lomzimba, ukungena kwedayi, i-x-reyi, uvavanyo loxinzelelo kunye nokujonga i-electron dimensional.Isixokelelwano esibanzi sokugcinwa kweerekhodi siqulunqa idatha yokulandeleka ngokupheleleyo.Ubume bobugcisa benkqubo yolawulo lwemveliso yekhompyuter ibonelela ngohlaziyo lwemo yemveliso yemihla ngemihla evumela ukuhambelana kokuhanjiswa kwexesha.
I-Aluminiyam Alloys iyaqhubeka nokuzinikezela kumgangatho ngenkqubo eqhubekayo yoncedo kunye nenkqubo yokuphucula ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bexesha elizayo, ngakumbi kwizicelo ezinzima.